Gawaarida Guryuhu waxay ku Habboon Yihiin Beddelka Wadista Gaarka ah | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaGawaarida Gurigu waxay ku haboonaan doonaan isbadal wadista gawaarida
21 / 01 / 2020 16 Bursa, GUUD, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, baabuurta, TURKEY, VIDEO
baabuurka guryuhu wuxuu ku habboonaan doonaa isbadalka wadista iskeed u taagan
Turkey ayaa Initiative Group Baabuurta ka Twitter waxaa laga sameeyey oo ku saabsan wadaagga gaariga gudaha cusub. Waxaa lagu sheegay wadaagga in gaadhigu leeyahay kaabayaal lagu cusbooneysiin karo internetka oo loo horumarin karo iyadoo la raacayo 'heerka 3 iyo wixii ka dambeeya' isbadal wadis oo iskiis ah.
Turkey ayaa Initiative Group Baabuurta (TOGG) dhamaadka 2019 ayaa sababay farax weyn kor u automakers qoyska.
Muwaadiniinta waxaa la soo bandhigay macluumaad cusub oo ku saabsan gaariga oo lagu soo bandhigay laba ikhtiyaar oo ah noocyada 'chassis' kala duwan: SUV iyo Sedan.
NIDAAMKA TAAGEERADA KHATARTA LA SAMEEYO
qaybsiga image TOGG by bogga Twitter ka dhigay "la casriyeeyay karaa gaariga Turkey ee internetka 'heerka 3 iyo wixii ka dambeeya' ee diinta ka driving goboleedka, iyadoo raacaysa kaabayaasha horumaray iyo drive sare ee gaadiidka magaalada raacaan nidaamyo taageero oo yarayn doona daal ee safar dheer" bayaanka ayaa sheegay in.
Gawaarida guud waxay noqon doonaan 5 dhalo
xoog High saamayn, xubno ammaanka firfircoon oo dadban oo dhamaystiran iyo nidaamka sare gargaarka darawalka oo u oggolaan doona Euro NCAP xeerarka ammaanka 2022 star of 5 qaadi doonaa si ammaan ah ku raaxaysan safarka la İNTURKEY wadaniga ah gaariga.
Qalabka waxaa naqshadeeyay xafiiska qaabeynta talyaaniga ee Pininfarina. Gawaarida nooca loo yaqaan 'Prototype' ayaa laga soo saaray dalka Talyaaniga.
In ka badan 100 injineer ayaa ku hawlan qaabeynta gaariga. Batteriga gaariga wuxuu ku dhexjiraa goobta. Waxaa loogu talagalay inay ka hesho 5 xiddigood imtixaannada shilalka Euro NCAP. Gaarigu wuxuu lahaan doonaa 7 jaangooyo iyo 2 boorsooyin ikhtiyaar ah. Moodeelkii ugu horreeyay ee la soo saaro waxaa loo qorsheeyay inuu noqdo nooca C SUV, marka la gaaro 2030, 5 nooc oo kala duwan ayaa lagu soo dari doonaa wax soo saar. Waxaa jira mowjadaha tulip-ka hore ee gaariga.
Qaybta qalabka ee gaariga wuxuu ka kooban yahay shaashad elektiroonig ah. Guddigu wuxuu leeyahay saddex shaashad oo muuqaal ah iyo 10-inji (25,4 cm) ah shaashad muuqaal ah iyo badhan ah. Gaarigu ma haysto muraayad dhinaca ah, taas bedelkeed, waxaa jira kamarado.
FARSAMADA FARSAMADA EE KAADHKA CARSKA
Gawaarida waxaa ku shaqeeya baytariyada lithium-ion. Laba baakadood oo koronto leh oo leh masaafo dhan 300 km iyo 500 km ayaa lagu bixin doonaa hal kharaj, iyadoo kuxiran awoodda bateriga. Baytariyada gaariga waxaa la qorsheeyay in 30% lagu soo oogo wax ka yar 80 daqiiqo. Nidaamka dib-u-cusboonaysiinta ee biraha lagu soo daro gaariga, waxaa la qorsheynayaa in matoorada ay u shaqeeyaan sida dynamo oo gaabis ah isla markaana ay kordhiyaan xaddiga illaa 20% ayagoo soo buuxinaya batteriga.
Gaariga waxaa loo qorsheeyay in lagu soo saaro laba matoor oo kaladuwan, kuwaas oo kala ah 200 HP oo leh waddo gadaal gadaal ah iyo 400 HP oo leh afar taayir-afaraad. Xawaaraha gaariga, oo xawaarahooda ugu dambeeya uu noqon doono 180 km / saac, waa 400-0 km / h dardargelinta nooca 100 HP iyo 4.8 ilbiriqsi 200 nooc oo ah HP.
Waxaa la qorsheeyay in gaadhigu si otomaatig ah uga helo cusboonaysiinta warshadda leh internet leh 4G / 5G, iyo in gaadhiga si dhakhso ah loo joojin karo haddii ciladdu xumaato. Waxaa loo sharraxay in gaadhigu lahaan doono astaamaha darawalnimada gaadhiga 3.
SIDEE BAAN LAGU CAAWIN KARTAA LACAGAHA LACAGTA?
Turkey ee Baabuurta siin doona hoggaanka tOGGer faafidda ilaa 2022 ku soo noqon doonaa in ay kaabayaasha xukun ballaaran ee guryaha, xafiisyada mahad waddada oo lagu qaadi karaa saldhigyada ay jidka ku. Iyada oo ay suurtogal tahay tikniyoolajiyada farsamada ee noqoshada baabuur iskuxiran oo caqli badan, adeegsadayaashu si fudud ayey u qorsheyn karaan oo u maamuli karaan qarashkooda gaariga.
XAGGEE AYUU KA SOO JEEDINAYAA MAGAALADA XARUNTA
Gawaarida ayaa laga soo saari doonaa warshad loo qorsheeyay in ay dhismaha ka bilowdo sanadka 2020 dhul ay leedahay Ciidamada Qalabka Sida ee Turkiga ee ku sugan Gemlik, Bursa oo la dhamayn doono sanadka 2021. Gaariga ugu horreeya ayaa la qorsheynayaa in laga sii daayo cajaladda sannadka 2022 oo uu bilaabo iibinta. Laga bilaabo Oktoobar 30, 2019, waxaa lagu dhawaaqay in wadar dhan 13 bilyan oo TL ah maalgashi go'an la sameyn doono 22 sano. Waxaa loo qorsheeyay in lagu shaqaaleeyo 4.323 qof xarunta wax soo saarka iyo in la soo saaro 5 kun oo gaadiid ah 175 nooc sanadkii. Canshuur dhimis farabadan oo kaladuwan sida cashuur dhaafka canshuuraha, cashuur dhaafka VAT, jarista canshuurta, taageerada caymiska maalgashiga maalgashiga iyo dammaanadda gobolka ee 30 kun gadashada gawaarida ayaa lasiiyay. Waxaa loogu talagalay in lagu soo saaro gaadhiga laga soo bilaabo 51% qaybo ka mid ah guryaha gudaha moodhadii koowaad iyo in la kordhiyo saamiga qaybaha maxalliga ah illaa 68,8% moodooyinka labaad iyo saddexaad.
Salarha Tunnel oo loo beddelay Rize Urban
Tikidhada koowaad ee tiknoolajiyadda bilaashka ah ee tareenada ee China ayaa lagu baaray China
Gawaarida guryaha ayaa samayn doona Electric 500 Qarashka Waddanka
Michelin waxay ku talineysaa xulashada daraasada iyadoo loo eegayo xilliga loogu talagalay wadista amniga
Tababbarka farsamooyinka wadista amaanka ah ayaa bilaabay in la siiyo darawalada gaadiidka dadweynaha ee Antalya
Gebze-Kösekoy Xawaaraha Sare ee 27 bishii Sebtembar
20 million 1 Euro sanadkiiba 500 oo ku kaydsan metro dhaqdhaqaaqa dhaqaale
Mashruuca Tababarka Wadista Bixinta Ammaanka iyo Darawalka
Tijaabada Gawaarida Guriga ee Euro NCAP
Warshadda Gawaarida Guryaha
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gudaha
Naqshadaynta Gawaarida Guriga
Qeexitaanka Gawaarida Guriga